प्रचण्ड गर्जनको अन्तर्य: - हिमाल दैनिक
विद्राेह कसकाे विरूद्द? आफ्नै पार्टीको पाइलट ओलीविरुद्ध कि सत्ताले नदेखेको कांग्रेस र त्यसको सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध? कि विरामी पर्दा परिवारले समेत नहेरेका पूर्वयुवराज पारसविरुद्ध? कि शेक्सपियरको चर्चित नाटक ह्याम्लेटमा जस्तै स्वयं आफैविरुद्ध?
२६ माघ २०७५, शनिबार १८:५४
साढे दुई वर्षअघि संसदमा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल पश्चात जवाफ दिने क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘कपडा काट्नु भन्दा पहिले दश पल्ट नाप्नु पर्छ ताकि कैँची चलाईसकेपछि पछुतो नहोस्।’
ओलीले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति अरु कसैप्रति लक्षित थिएन। तत्कालिन सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति सोझै लक्षित थियो, जसले सरकारमै बसेर कांग्रेससँग मिलोमतो गर्दै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए।
यो अवधिमा नेपालको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। त्यतिबेलाका कट्टर र परस्पर विरोधी दुई दलका दुई नेता ओली र दाहाल विगत डेढवर्ष यता एउटै पार्टीरुपी जहाजको दुई पाइलट बनेर मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली पार्टीमात्र होइन शक्तिशाली सरकार मार्फत राज्यसत्ता चलाइरहेका छन्।
तर, त्यहि शक्तिशाली पार्टीका द्धितीय अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, यहि अवस्था रहेमा मुलुकमा नयाँ माओेवादी जन्मिन्छ र झन ठूलो लडाई हुन्छ।
आखिर तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहाल उर्फ प्रचण्डले शुक्रबार किन त्यसरी गर्जिद देशमा फेरि अर्को माओवादी जन्मिन्छ र मुलुकमा अझै ठूलो लडार्ई हुन्छ भने? प्रचण्ड गर्जनको अन्तर्य के हो?
नेपालको बहुदलीय संसदीय राजनीतिमा जनताले कहिल्यै पनि निरन्तर एउटा पार्टीलाई मात्रै निर्वाचनमा मत दिएर विजयी बनाएका छैनन्। चाहे ४८ सालको आम निर्वाचन होस् वा त्यसपछिका निर्वाचनमा। जनताले प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा आफ्नो मतमार्फत राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वको परिक्षण लिँदै आएका छन्। यसरी जनताले हरेक निर्वाचनमा मत दिने क्रममा उनीहरुले युद्ध र विद्रोहको तयारीका निम्ति मत दिएका होइनन् र छैनन् पनि।
अझै स्पष्टसँग भन्ने हो भने, नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरुप तय भएका तीन तहका संरचनामा दुई नम्बर प्रदेशमा बाहेक बाँकी सबै प्रदेशका स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नेकपाकै प्रतिनिधिलाई मत दिएका छन्। अर्थात देशको राजनीतिक स्थिरता, संमृद्धि र विकासका लागि स्थायी सरकार बनाउन मत मागेको नेकपाको परिक्षण गर्न आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका हुन्।
यसका बाबजूद दाहालले शुक्रबार युद्धकालिन अवस्थामा आफ्ना छापामारहरुलाई गोप्य प्रशिक्षणमा दिएकै शैलीमा किन दिए यस्तो विवादस्पद अभिव्यक्ति?
पाइलटसँग को-पाइलटकै भरोसा उड्यो!
यसको राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवीना दाहालको अभिव्यक्तिको अन्तर्य थाहा पाउन सहज छैन।
पुष्पकमल दाहाल सत्तारुढ दल नेकपाका को पाइलट हुन्। तर, उनको मानस्पटलको कुनै पत्रामा अझै पनि उनीसँगै उनको पार्टीले छाडिसकेको ‘प्रचण्ड पथ’को छाप र चरित्र मेटिएको अथवा हराएको छैन्।
प्रचण्ड पथको पहिलो र विशेष खुवी भनेकै यिनी जुनसुकैबेला राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ र बार्गेनिङ गर्न सक्छन्। यो उनको पहिलो हतियार हो। चाहे युद्धकालिन अवस्थामा तत्कालिन राजसंस्थासँग होस् वा सात दलसँग उनले यो हतियार समानान्तर रुपमा प्रयोग गरेर थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको माओवादी हिंसाको राजनीतिलाई सफल अवतरण गराए।
त्यसपछिका दिनमा पनि उनले यो हतियार परित्याग भने कहिल्यै गरेनन्। चाहे शान्ति प्रक्रियाको समयमा पुनः युद्धमा फर्किने धम्किपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर होस् वा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अथवा त्यसपछि बनेका सरकारबाट बाहिरिने क्रमको घुर्कीमा उनले यो हतियार उजाउँदै आएका छन्। कहिले एमाले, कांग्रेस र भारतलाई लल्कारेर त कहिले उनीहरुसँग बार्गेनिङ गरेर उनी केन्द्रीय राजनीतिमा जिवित छन्। उनको त्यो जिजिविसा अहिले पनि मरेको छैन।
दोस्रो, जुन सोच र उद्देश्यका साथ उनले नेकपाका पाइलट अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै पार्टी एकीकरण गरे त्यो एकीकरणबाट उनले सोचे जस्तो परिणाम आउन सकेको छैन।
चाहे त्यो दुई पार्टीबीचको एकीकरण पश्चात केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गर्नु पर्ने पार्टी एकीकरणको सवाल होस् वा अत्याधिक बहुमतको आडमा करिब करिब राज्य सत्ता कब्जा गरी सरकार सञ्चालनको विषयमा समानान्तर साझेदारी। यी दुबै सवालमा दाहालको अपेक्षा परिपूर्ति हुन सकेको छैन्। भलै उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पाँच वर्षको अवधिमा आधा आधा समय बाँडेर सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका किन नहुन। त्यसको लागि राजनीतिक वातारण र आधार बनाउन दाहाललाई हतारो भए जस्तो छ।
अर्कोतर्फ विगत ११ महिनाको अवधिमा सरकार र त्यसको नेतृत्वले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा बलियो बनाउने भन्दा पनि दिनप्रतिदिन खस्किदै गएको अवस्था छ। जसले गर्दा विगतमा माओवादी जनक्रान्तिको माध्यमबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने सपना देखेका कतिपय क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु नेता नेत्रविक्रम चन्दको मोर्चामा संगठित हुने खतरा बढ्दै गएको दाहाल जस्ता चतुर राजनीतिज्ञले नबुझ्ने कुरै भएन।
त्यसैले एकीकरण पश्चातको नेकपाभित्र कोही क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट छ भने त्यो ओली होइनन् म नै हुँ। मैले मात्रै मात्र पार्टीभित्र र बाहिर रहेका कम्युनिष्ट विचाराधाराबाट शिक्षित र दिक्षित जनमतलाई नेतृत्व गर्न सक्छु। हिँजो युद्दकालिन अवस्थामा जुन जातिवादको नारा उछालेर राजनीतिमा सफलताको भर्याङ चढे त्यो भर्याङका खुड्किला आफ्नो पकडबाट नफुत्किउन भन्ने उनको चाहना छ।
तर, उनले यी सबै विषय सझिँदै गर्दा यो विर्सीसकेका छन् कि जसलाई उनले माक्र्सवाददेखि माआवादसम्मका सिद्धान्त रटाएर कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताको लाममा उभ्याएका थिए उनीहरु दाहालसँगै एडम स्मिथको उपयोगीतावादी सिद्धान्तमा लिप्त र पोख्त भइसकेका छन्।
तेस्रो तथा गम्भिर विषय भनेको संक्रमणकालिन न्यायको विषय हो, जसले अझै पनि दाहाल र उनीसँग विगतको माओवादी हिंसात्मक द्धन्द्धमा सक्रिय थिए, उनीहरुका लागि युरोप र अमेरिकाको त्रास कायमै छ। त्यहि कारण अहिलेसम्म दाहालदेखि पूर्वमाओवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरु युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा भ्रमणको चाहना भएर पनि जाने हिम्मत गरेका छैनन्। बेला बखतमा उठ्दै आएको मानवताविरोधी क्रियाकलापको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो विषय नपुगोस भन्ने उद्देश्यले नै दाहाल र उनका सहयात्रीहरु संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्दा बेग्लै नेपालको आफ्नै मोडलमा टुंगो लगाउन जोड दिँदै आएका छन्।
अझै पनि दाहालको मनभित्रबाट त्रास हटिसकेको छैन्। त्यहि त्रासको परिणाम हो दाहालले भेनेजुयलाकोबारेमा अमेरिकाविरुद्ध हालै व्यक्त गरेको विवादस्पद अभिव्यक्ति।
जुनसुकै व्यक्ति जति शक्तिशाली छु भन्ने ठान्दछ उसको मनमा त्यहि गुणात्मक मात्रामा त्रास पनि रहेको हुन्छ र त चर्को बोल्ने गर्दछ र बेलाबखतमा हिंस्रक बन्दछ पनि। जंगलको राजा सिंह जति शक्तिशाली हुन्छ त्यति नै हिंस्रक पनि। तर, उसमा त्रासको मात्र पनि त्यति नै रहन्छ र त उसले एउटा सानो खरायोलाई पनि सोझै आँखामा आँखा मिलाएर हेर्न र शिकार गर्न सक्दैन। लुकेर शिकार गर्दछ।
देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको शक्तिशाली नेता दाहालको मनमा पनि डरको मात्र धेरै। राणाकालमा वीरशम्शेर जबराको जस्तै। वीरशम्शेर जति शक्तिशाली थिए त्यति नै काँतर पनि। त्यसैले उनी हरेक रात कोठा बदलेर सुत्ने गरेका थिए रे भन्ने इतिहास हामीले पढेका छौँ।
दाहालले अहिले यसरी कोठा नबदलेपनि विगत १३ वर्ष यताको राजनीतिक यात्रामा सहयात्रा र सहपार्टी बदल्दै आएका छन्। कहिले कांग्रेस र भारतको सामिप्यतामा गएर त कहिले एमाले, चीन र भेनेजुयलासँगको साखुल्यतामा।
तर, अहिले उनले एमालेसँग एकीकरण गरेर बनाएको पार्टी वास्तवमा नाम मात्रको कम्युनिष्ट पार्टी हो, जहाँ माक्र्सको टाउको र एडम स्मीथको भुँडि सम्मिश्रण भइसकेको छ। अर्थात स्वीट्जरल्याण्डको डाभोेस र भेनेजुयलाको कम्बिनेशन भएको छ। कहिले टाउको अघि सर्छ र भेनेजुयलाको कुरा गर्छ त कहिले डासोस रुपी भुँडि अघि लाग्दछ र प्रधानमन्त्री ओलीबाट अमेरिकाका राजदूतसमक्ष ‘टङ्ग स्लीप’ भयो भन्दै त्यसको खण्डन हुन्छ।
त्यसैले अब दाहालले जहाँ पुगेर युद्ध र क्रान्तिका कुरा गरेपनि उनको पछाडि उभिने कार्यकर्ताको लाम धेरै छोटो भइसकेको छ। किन भने विगतमा जनवादी क्रान्तिको सपना देखेर मुक्तिप्रसाद अधिकारीको गर्धन रेट्नेदेखि माडी घटनामा निर्दोष जनतालाई बमको धुँवामा उडाउन ज्यानको बाजी थाप्नेहरु सत्ताको भत्तादेखि ढुंगा गिट्टी, बालुवा र काठ जस्ता वैधअवैध ठेक्कापट्टा र सरुवा बढुवामा लिप्त भएर भुँडिको खाँतिर बाँच्न पोख्त भइसकेका छन्।
भलै दाहालले सच्चा कम्युनिष्ट मै हुँ, जातिय नारादेखि संघीयताको मर्म छाडेको छैन भन्ने सन्देश दिएर आफूले विगारेको बोलीमा स्यालझिक्रो हाल्ने दुश्प्रयास गरेका किन नहुन्।
होइन भने, दाहाल जो अबको डेढवर्षभित्रै मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने योजना र सपनामा छन् उनले अब गर्ने विद्रोह कसको विरुद्ध हो? हिँजोका दिनमा उनले राजसंस्था अथवा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको हिमायती नेपाली कांग्रेस र उसका निहत्था कार्यकर्ताका विरुद्ध थियो होला। अब राजसंस्थाको उन्मूलन नै भइसक्यो। कांग्रेस संसदभित्र सत्ता र सभामुखले नसुन्ने र नदेख्ने प्रतिपक्षी बेन्चमा छ।
त्यस अवस्थामा उनले को विरुद्ध बिद्रोह गरेर झन ठूलो लडाई लड्ने हो? आफ्नै पार्टीको पाइलट ओलीविरुद्ध कि सत्ताले नदेखेको कांग्रेस र त्यसको सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध? कि विरामी पर्दा परिवारले समेत नहेरेका पूर्वयुवराज पारसविरुद्ध? कि शेक्सपियरले लेखेको चर्चित नाटक ह्याम्लेटमा जस्तै स्वयं आफैविरुद्ध?
होइन भने को पाइलटको यो अभिव्यक्ति कसको विरुद्ध हो? यो देख्दा लाग्दछ, केहि महिना अघि विमान बंगलाको जहाज जहाँ दुई जना पाइलटमध्ये एकजनाले विमानस्थलको टावरको र अर्कोले कुनै अदृश्य पावरको निर्देशनमा जहाज अवतरण गराउन खोज्दा भयंकर दुर्घटनामा परेर २२ जना नेपाली विद्यार्थीसहित ५१ जनाको निधन भएको थियो।
अहिले सत्तारुढ दलका दुई पाइलटबीचको कम्युनिकेशन च्यानल टावर र पावरबीचमा जुधेको मात्रै हो कि अलग अलग कम्युनिकेशन भएको हो यो रहस्यको विषय छ। तर, सामाजिक मनोविज्ञानले भन्छः जब दुई अतिवादी वा अनैतिक व्यक्तिबीच सम्बन्ध कायम हुन्छ त्यो सामान्य स्थितिमा टुट्न कठिन हुन्छ।
जुन स्वार्थले एमालेका ओली र माओवादीका दाहालबीच मिलन भएको हो त्यो यसै छुट्नेवाला छैन। यदि त्यो टुट्यो र छुट्यो भने साच्चिकै भयानक दुर्घनामा पर्छ।
होइन भने शुक्रबार दाहालले दिएको अभिव्यक्ति देखावटी मात्रै हो। भोलि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेपछि आफूहरुबीच ‘फाटेको मन तुन्ने’ कोशिश उनले गर्नेछन्। यति गरेन भने हाम्रा क्रान्तिकारी कम्रेडहरु विप्लवसँग जानबाट रोक्न र सरकारप्रति मर्दै गएको जनविश्वासका जगाउन कसरी सम्भव छ? त्यसका लागि पनि यत्ति त बोल्नै पर्यो नि ओली कम्रेड!
Prevपछिल्लोजबर्जस्ती करणी गर्ने दुई पक्राउ
अघिल्लोराष्ट्रपतिबाट वसन्त श्रवणNext